मल नहुँदा किसान चिन्तित
परासी / निषेधाज्ञाका कारण रासायनिक मल वितरण हुन नसक्दा पश्चिम नवलपरासीका किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। विगतका वर्षहरूमा किसानहरूले मलको अभाव झेल्दै आएका थिए। तर अहिले जिल्लामा मल उपलब्ध भए पनि निषेधाज्ञाका कारण वितरण हुन सकेको छैन।
मल पाउन हुन नसक्दा धानको बीउ राखेका किसानहरू मर्कामा परेका छन्। अहिले जिल्लाका सबैजसो किसानहरूले धानको बीउ राखिसकेका छन्। समयमा मल नपाउँदा उत्पादनमा समेत कमी आउने भन्दै किसानहरू चिन्तित छन्। ‘पटकपटक मलका लागि पालिका र सहकारी संस्थामा गयौं। मल नै आएको छैन भनेर फर्काउने गरेका छन्।’ सुस्ता गाउँपालिका–५ का किसान वसन्त कुर्मीले भने।
विगतमा मल अभाव हुँदा किसानहरूले भारतबाट ल्याउने गरेका थिए। अहिले सीमा नाका बन्द भएकाले विकल्प पनि नरहेको प्रतापपुर गाउँपालिकाका किसान नारायण भरले बताए। ५/७ दिनभित्र मल नपाए बीउ हुर्किन नपाउने रामग्राम नगरपालिकाका किसान रामजी गुप्ताले बताए।
जिल्लाको २९ हजार ९ सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको छ। जसमध्ये ८० देखि ९० प्रतिशत किसानले धानको बीउ राखिसकेको कृषि ज्ञान केन्द्रकी कृषि प्रसारक अधिकृत एवम् सूचना अधिकारी मनीषा पौडेलले जानकारी दिइन्। समयमा मल नपाए उत्पादनमा कमी आउने उनको भनाइ छ। किसानहरूलाई अहिले डीएपी मलको आवश्यक छ।
पयाप्त नभए पनि तत्कालका लागि किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने मल रहेको र निषेधाज्ञाले वितरण गर्न नसकिएको कृषि सामग्री कम्पनी लि. परासी शाखाका प्रमुख खडानन्द बञ्जाडेले बताए। जिल्ला प्रशासनले जेठ १५ गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लगाएको छ। निषेधाज्ञामा सम्पूर्ण पसल, व्यवसाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पूर्ण रूपमा बन्द छन्।
कम्पनीसँग अहिले ६ सय टन डीएपी र साढे ५ सय टन युरिया मल छ। कम्पनीले जिल्लाका ५५ वटा सहकारी मार्फत मल वितरण गर्दै आएको छ। ‘बैंकहरू बन्द छन्। सहकारीहरूले रकम जम्मा गर्न पनि समस्या छ।
अर्कोतर्फ मल वितरण गर्दा किसानहरूको भीड बढ्ने र कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने भएकाले पनि समस्या आएको छ। प्रशासनले पनि अनुमति दिएको छैन’ बञ्जाडेले भने। निषेधाज्ञा अवधिभर मल वितरण गर्ने अवस्था नरहेको र त्यसपछि प्रशासनको अनुमतिमा मल वितरणको व्यवस्था गर्न सकिने बञ्जाडेको भनाइ छ।
किसानहरूलाई बीउ र मल लैजानका लागि रोकतोक नगरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रले बताए। सुरक्षित तरिकाले मल वितरणका लागि छलफल गरी किसानहरूको समस्या समाधानतर्फ लाग्ने प्रजिअ मिश्रको भनाइ छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्याेः विस्थापितहरूमा सरुवा रोगको जोखिम उच्च
थपिँदै कोभिड भेरियन्ट, नेपालमा ‘अल्फा’ को मात्र परीक्षण सम्भव
किसानलाई यस वर्ष मल पाउन सहज
बिएन्डसीलाई सम्बन्धन : निर्देशनलाई नै नियम मान्न प्रधानमन्त्रीको दबाब, आयोगले मानेन
नौवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई बिएन्डसी पनि थपिदिने तयारी
धान दिवस मनाउने तयारी
प्रधान सम्पादक तथा प्रकाशक: दुर्लभ शाही
कार्यकारी सम्पादक: भिम उचै ठकुरी
उप-सम्पादक: दिपक शर्मा
बजार प्रबन्धक : शेर बहादुर शाही
फोन : ९८५११२३२५१
डा. देवेन्द्र आचार्य
धुम्बाराही , काठमाडौँ
इमेल : contact@shikshyakhabar.com
फोन : +९७७ -९८४१४९५१०३ / ९८५५०५०१०३
वेब : www.shikshyakhabar.com
सूचना विभाग दर्ता नं. – ७२१/०७४/०७५
यस शिक्षाखबर डट कम ठकुरी क्रिएसन प्रा. लि. द्वारा संचालित शिक्षा सम्बन्धि न्युज पोर्टल हो । © २०१६ - २०१८ सर्वाधिकार सुरक्षित
Website design and develop By : thakuri creation